AVOTRA SOA AMAN-TSARA I RAH-CKIKY : Mihatsara ny toe-pahasalamany, hoy ny vadiny
Ny tolakandron’ny alahady 1 oktobra, niely ny feo tao anaty tambajotra sosialy fa nodimandry ny mpanakanto Rah-Ckiky vokatry ny ratra nahazo azy. Vaovao izay tsy marina. 3 octobre 2017
Araka ny antso an-tariby nifanaovana tamin’ny andefimandriny, Diane Françoise, dia efa mihatsara ny toe-pahasalamany. Ny alahady hariva tamin’ny 5 ora dia efa nanomboka nahatsiaro tena ity mpanakanto ity na dia somary mbola hita reradreraka aza.
Raha tsiahivina dia nisy niditra an-keriny tao amin’ny trano fonenany tao Tsarahonena Betainomby-Toamasina i Rah-Ckiky, ny maraimben’ny alahady 1 oktobra. Nokapain’ireo olon-dratsy tamin’ny antsy ny lohany sy ny sorony. Nitsoaka nandositra ireo olona nahavanon-doza taorian’izay.
Ara-potoana ny fahatongavana teny amin’ny Hopitaly Be ka avotra soa aman-tsara ny ainy na dia teo aza ny fahaverezan-dra.
Izahay eto amin’ny gazety Ino Vaovao Faritra dia mirary fahasalamana feno ho an’i Rah-Ckiky.